Ciidamo dheeri ah oo loo soo dirayo Somaaliya Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ciidamo dheeri ah oo loo soo dirayo Somaaliya Ciidamo tiradoodu kor u dhaafayso saddex kun oo askari oo ka socota waddanka Uganda ayaa filayaa inay yimaadaan Somalia kadib marka ay dhalato dawladda cusub.
Sida laga soo xigtay Saraakiisha dowladda Uganda 3,237 askari oo katirsan ciidamada Uganda oo tababar loo soo gabagabeeyay ayaa waxaa lagu wadaa in loo soo diro dalka soomaaliya si ay ugu biiraan ciidamada AMISOM ee midowga afrika kuwaasoo taaageera dawladda KMG Somalia.
Taliyaha ciidamadani levy karuhanga oo khudbad u jeediyay askarta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada lasoo dirayo bisha agoosto kadib marka ay dhalato dawladda cusub ee Somalia isaga oo sheegay in Alshabaab ka saari doonaan gudaha dalka Somalia.
Ciidankani oo tababar loogu soo gabagabeeyay xerada singa ee Kampala ayaa waxaa tababaray saraakiil isugu jirta ingiriis iyo faraansiis, waxaana lagula dardaarmay in meel kasto oo ay qabsadaanay ka suraan calanka Uganda si ay u muujiyaan halkaay ka socdaan.
Tirada ciidamada AMISOM ayaa soo kordheysa, iyadoo dowlado kale oo ka mid tahay Serelion ay shaaca ka qaadeen in ciidamo ay usoo dirayaan Soomaaliya Xaafiiska Wararka Warlalis.com